Oofuu ammee jijjiiri.
Barruu:Himamsa itergaa kamiyyuu kan oofuu qubee haaraa of keessa qabu.Yoo barbaadde faaydamuu dandeessa. sirnasxaa URL .
Oofuun qubee guddaadhaan moggafamuu qaba.Fodaalee jalatti, qubeen ati oofuudhaan moggaaste ijaarsa LASTDRV dhaan murataa'e. yoo qajeelfami diraa arfii danuu ta'e, qubee duraa qfatuu fydhtama qaba. Yoo oofuu hin jirree gahiinsaan fudhate,dogogorri hima OnError jedhamu waliin gabaafama.
76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne
ChDrive "D" REM Yoo oofuun 'D' jiraate qofa danda'ama.